Abaqhubi be-Tour Edge Abaqhubi: ii-Exotics, i-Bazookas kunye nalapho Uthenge khona
Abaqhubi be-Tour Edge Abaqhubi: ii-Exotics, Bazooka kunye nendlela yokuzifumana
Ngoko unomdla wokuthenga nokudlala umqhubi weTend Edge . AWUKHO wedwa. Ngoxa i-Tour Edge ayikho ndawo kufuphi nombane omkhulu kwiisithuthi (okanye ezinye iiklabhu zegalufu), yinkampani eqhubeka ikhula.
I-Edge Tour iye yajikeleza ukususela kwiminyaka ye-1980, xa iqala njengenkampani ye-niche. Kwiminyaka emininzi inkampani encinci-encinci ikhule ibe ngumenzi wemidlalo yegalufu kunye neefowuni, ixhaswe ngabadlali bezokhenketho kwaye iphule kwi-Top 10 ekuthengiseni kwiindidi ezahlukeneyo zeblaki.
Oku kuquka abaqhubi.
Kwaye abaqhubi abahamba phambili be-Tour Edge baye bajikeleze ixesha elide: umgca weBazooka kunye ne-Exotics line. Makhe sibone iibini zombini, kunye nendawo apho abaqhubi be-Tour Edge bathengiswa khona. Yaye uqaphele ukuba ukukhethwa kwindlela yokuqhuba umzuzu ukuya kwi-Tour Edge, tyelela iwebhusayithi yekampani, touredge.com.
Abaqhubi be-Tour Edge Exotics
I-Tour Edge iqalise umgca we-Exotics lineglabhu zegalufu, kuquka umqhubi, phakathi no-2000-ufumana njenge-microbrand, epheleleyo kunye ne-microsite yayo (eye yabuyiselwa kwi-touredge.com).
Cinga nge-Exotics yintsapho yeeklabhu njenge-high-end, ekupheleni kwexabiso eliphezulu eliphezulu le-Tour Edge umqhubi womkhiqizo.
Abaqhubi be-Exotics, xa beqala ukuzisa, bazisa isakhiwo sokwakha esibizwa ngokuba yi "combo-brazing" kwigalufa. I-Combo-brazing yindlela yokwenza izixhobo zokutywinwa kwamakhemikhali ndawonye (njengeklabhu ibhekane nomzimba wokuqhuba) ngaphandle kokusebenzisa i-welding.
Ukugqithiswa nokuhambisa i-welding kunomthwalo kwaye kwandisa i-flex.
Abaqhubi bee-Tour Edge ze-Exotics banikela iigolisa ezixhobo eziphezulu eziphambili, uyilo oluphambili kunye nokwakhiwa, kunye nezixhobo zokulungelelanisa. Akunjalo ngokukhawuleza kubaxhasi abancinane, kodwa kwi-firm stability of drivers, i-Exotics yiyo ebhenela abadlali begolfu abangcono (kunye nabo banemali engaphezulu yokuchitha).
Tour Edge Bazooka Abaqhubi
Nangona i-Exotics ibonisa ukuphela kwesiphelo se-Tour Edge umqhubi we-Tour, abaqhubi be-Bazooka bamele ukuphela kwexabiso. Kwaye ngoxa abaqhubi be-Exotics banokuzikhethela abantu abancinci, abaqhubi be-Bazooka yiyo eyakhelwe abadlali begrifti yokuzonwabisa abafuna yonke intsilelo abayifumanayo kwaye bafune umgama omde.
I-Edge Tour iye yenza abaqhubi ngegama elithi "Bazooka" ixesha elide, elide (ixesha elide kunegama le-Exotics liye lajikeleza). Namhlanje, bafana nomqhubi wokuphosa, ngoxa abaqhubi beBaokaoka banamathuba amaninzi okubandakanya iimpawu zokulungiswa.
Ukulungiswa - ukhetho, ngokusebenzisa i- hosel eyakhelwe ngokukhethekileyo , ukutshintsha i- loft yomqhubi kunye neengalo zokulala- kunokubangela ingxaki ngakumbi kunokuba kubaluleka kubaninzi bezandla-mbini kunye nabaninzi abakwenzayo. Kodwa ingongoma yokuthengisa eninzi abaninzi abakhiqizi bayifakela; ukufumana abaqhubi abanamaholide amadala kunye nezakhiwo eziqingqiweyo ziba nzima konyaka ngamnye. Ukuba nabaqhubi baBaoka bajikeleza ukuzalisa loo niche - kwaye ngokuqhelekileyo ibe ngaphantsi kwe-$ 200 kwaye ngezinye izikhathi beza kufikelela kwi-$ 100 - into enhle.
Ukuthenga Umqhubi we-Tour Edge, entsha okanye esebenzisiweyo
Qaphela ukuba ii-Exotics kunye neBazooka azikho imida yodwa yabaqhubi be-Tour Edge.
Inkampani inamanye okukhethwa kukho, okunye anokubandakanya umqhubi owela kwindawo ethile phakathi kwe teknoloji kunye / okanye kwinqanaba lentengo.
Njengoko sathi ekuqaleni, i-Tour Edge ayiyona inkampani encinane eyayisetyenziswa. Namhlanje iiklabhu zayo zilula ukuzifumana. Hlola umthengisi indawo kwiwebhsayithi ukufumana umthengisi osisitena kunye nomthengi osondeleyo.
Uninzi lwabathengi begalufa be-golf (kunye ne-Amazon) nabo baphatha abaqhubi be-Tour Edge. Ngaphezulu, kukho i-touredgestore.com yenkampani.
Kuthekani ngokuthenga umqhubi we Tour Tour? Inkampani isebenzela i-touredgepreowned.com, equka ukhetho lwabagadi begolfu ukuthengisa okanye ukuthengisa kwiiKhompyutha ze-Tour Edge kwiinkampani. Ukuze ufumane ingcamango yezinga lokuya kwi-Tour Edge umqhubi (okanye ubunani bezohwebo) oye uhamba naye, tyelela i-PGA Value Guide.
Iingcebiso zokuthenga ii-Best Rock Climbing Shoes
Isixhobo esisisiseko seBouldering
Imbali emfutshane yoMbutho kaRhulumente kwi-American Economy
'Mthi weKrisimesi' Iingoma kunye neeChords
I-fille du regiment - i-Synopsis
Amazwe aseMntla Merika kunye neCaribbean ngeNgingqi
Ngaba Unokuzikhusela NgamaGila okanye kwiLensi yoLwazi?
IiKlayina zeChola yeeNqununu noko kuthetha ntoni
Umxholo wefayile: Ubugcisa beCulture kunye neBrikhi yeHomo Erectus kwiThathu
Indlela yokuguqula amaDayimenti aDemimenti kwiiDigrees, imizuzu, iiSibini
I-Haunting Ghost Stories ye-West Virginia Penitentiary